Dowladda UK oo War Cusub kasoo saartay doorashada Soomaaliya farriina u dirtay…. - Awdinle Online
Dowladda UK oo War Cusub kasoo saartay doorashada Soomaaliya farriina u dirtay….
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay khilafka weli kajira doorashooyinka Soomaaliya, taas oo horseeday amni darro weyn, waxaana ay Madaxda dowladda iyo dowlad Goboleedyada ugu baaqday in si deg deg ah loo qabto doorashooyinka.
Qoraal kasoo baxay Boqortooyada Uk ayaa waxaa lagu yiri” si loo ilaaliyo nabadgelyada, xasilloonida iyo horumarka Soomaaliya, waxaa muhiim ah in sida ugu dhakhsaha badan loo qabto doorashooyin ku dhisan is-afgarad. Boqortooyada Midowday (UK) waxay la socota go’aanka Madaxweyne Farmaajo ee ah inuu dib ugula laabto wadahadalka madaxda Dowladaha xubnaha ka ah Dowlada Federaalka isagoo cuskanaya heshiiskoodii 17-kii Sebtember, kaas oo ah wadada kaliya ee ay ansixiyeen Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo dhamaan Dowladaha Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka.
Sidoo kale dowladda Uk ayaa bogaadisay Ra’iisel Wasaare Rooble iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka sidii ay u diideen muddo kordhinta.waxaana ay ugu baqeen Madaxweynaha iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Federaalka inay si deg deg ah u wada hadlaan si shuruud la’aan si ay u sameeyaan tanaasul lagama maarmaan ah oo ay si daacadnimo leh uga gorgortamaan.
Sidoo kale Dowladda Ingiriiska ayaa ugu baaqday dhamaan Ciidamada dowladda inay joojiyan rabshadaha, isla markaana qorshahooda ay ku bedelaan la-dagaalanka Al-Shabaab.
“ Waxaan ugu baaqeynaa dhamaan ciidamada amaanka caasimada inay ka waantoobaan rabshadaha isla markaana ay ilaaliyaan xasiloonida. Waxaa lama huraan ah in ciidamada amniga ay xooga saaraan dadaalkooda ku aadan la dagaalanka cadowga guud ee Al Shabaab si loo hubiyo inaysan ka faaideysan hubanti la’aanta siyaasadeed ayaa lagu soo geba-gabeeyay qoralka dowladda Uk.
Previous articleSheekh Shariif oo Mas’uuliyada dagaalkii dhacay ku eedeeyay Golaha Shacabka
Next articleGolaha Shacabka oo kulan leh iyo Farmaajo oo hortagay